Ukuphupha iisandals Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Ukuphupha ngeembadada. Ngaba uyafuna ukwazi indlela yokutolika amaphupha? Funda ukuze ufumane.
Iimbadada izihlangu ezinobunzima zasehlotyeni zabafazi ezenziwe ngemitya okanye ngesikhumba esivulekileyo. Ukukhanya kwabo kubenza babe nomtsalane ngokulinganayo kumadoda nabasetyhini kwiintsuku ezishushu. Ziyafumaneka kwiinguqulelo ezahlukeneyo ezinjengeembadada zethanga, okanye iimbadada zaseRoma. Le yokugqibela sele ibonisa ukuba olu hlobo lweembadada lwalususela kumaxesha amandulo. Igama livela kwigama lesiLatini "sandalium."
Kangangexesha elide kwakugqalwa kungafanelekanga ukunxiba izihlangu ezivulekileyo. Ukuba wayeza kunxiba iimbadada, ubuncinci wayenxibe iikawusi, ngoku ezijongwa njengesono esifayo. Kwi-1970s, iimbadada zafumana uhlaziyo kwi el mundo yefashoni. Ngoku ziyafumaneka kwizinto ezahlukeneyo, ezinezithende eziphakamileyo okanye ezithe tyaba, kwaye zihlala zidityaniswa nezambatho ezikhanyayo, kodwa kunye neebhulukhwe.
Kuba iimbadada ikakhulu zinxulunyaniswa nobushushu basehlotyeni kunye nokukhanya okumnandi kweenyawo, iphupha kwizicathulo ezinje ngokunokwenzeka linxulunyaniswa neemvakalelo ezimnandi. Ukuba uphupha iimbadada ezithe tyaba, intuthuzelo mhlawumbi iphambili, ezinesithende eziphezulu zibonisa ulwazi ngakumbi lwefashoni. Ukutolikwa kwamaphupha, imeko yeembadada zihlala zinika ulwazi oluthe kratya malunga nephupha elo.
1 Uphawu lwephupha «iimbadada» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iimbadada» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iimbadada» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iimbadada» - ukutolikwa ngokubanzi
Iimbadada zibonisa njengophawu lwephupha ukuba umphuphi uthanda ukufuna umendo ngokuxhathisa okuncinci. Ukhetha ukunqanda imiqobo kunye nobunzima, endaweni yoko uyaxabisa intuthuzelo kwaye lula. Nangona iimbadada ekutolikeni amaphupha zikhomba ekuqondeni ukuba umntu ophuphayo angabanelisa abanye abantu kunye neemfuno zabo.
Nangona kunjalo, uphawu lwephupha "iimbadada" zikwabonisa a umntu ongakhathaliyo ukuba uhlala engazithathi nzulu izinto ngokwaneleyo. Isidingo senkululeko esichaziweyo, esichazwe ephupheni elinjalo, sinokukhokelela kwinto yokuba umntu ophuphayo wohlulwe kwabanye abantu. Ukutolikwa kwamaphupha, iimbadada kufuneka ziqondwe njengesilumkiso sokuba ungabi ngumntu ongamaziyo olilolo.
Ukutolikwa kwamaphupha, kubalulekile ukukhumbula ukuba kwenzeka ntoni kanye kwisimboli yephupha "iimbadada" kwaye ijongeka kanjani. Ke iimbadada ezigugileyo kufuneka ziqondwe ephupheni njengesimemo sokusondela kwimeko kancinci nangobulumko.
Nabani na ophupha ngokufumana iimbadada ezindala nezisele zisetyenzisiwe kufuneka athathe indlela endishiye nayo kwakhona. Isimboli yephupha ihlala itolikwa njenge zokuhamba. Nabani na onxiba iimbadada ephupheni kwaye ahambe nabo uya kushiya kungekudala kubomi bokwenyani.
Ibhanti elonakeleyo luphawu lokuba umphuphi utshintshe ingqondo. Nangona kunjalo, ukuba umtya wesihlangu uqhawulwe ngokupheleleyo, oku kuxela ukurhoxiswa okungafunekiyo kohambo ngaphakathi kwengcaciso yephupha.
Uphawu lwephupha «iimbadada» - ukutolikwa kwengqondo
Kwitoliki yamaphupha, uphawu lwephupha "iimbadada" lubonisa isimo esibi esibi. Iphupha lihlawulwa kakhulu ngeengcinga ezihlala zijikeleza kwiingxaki ezithile. Isenokwenzeka ukurhoxa ngumphuphi. Kungenxa yokuba umphuphi uqinisekile ukuba imeko embi yangoko nangoko ayinakuphuculwa.
Kutoliko lamaphupha, iimbadada zikwanesini sabasetyhini. Ku-Freud, ukunxiba izihlangu kuqondwa njengophawu lwesenzo sesondo, apho kuboniswa khona iminqweno yesini, kodwa iphinde icinezele ukungazithembi.
Uphawu lwephupha "iimbadada" ukuba izihlangu zikwenzakalisa, mhlawumbi unento oyicingayo ngobomi bokwenyani. Iimbadada ezithuthuzelayo zibonisa ukutolikwa kwamaphupha ukuba okwangoku yonke into ihamba ngokwesicwangciso.
Ukuba iimbadada zigugile okanye zikrazukile ephupheni, ngenxa yoko zifuna ukulungiswa, uphawu lwephupha luphawu lobuthathaka obunokwenzeka besimilo. Umphuphi kufuneka azigwebe ngokunyanisekileyo kwaye asebenze kwiimpazamo zakhe.
Uphawu lwephupha «iimbadada» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha "iimbadada" lutolikwa njenge unxibelelwano lomhlaba ngumphuphi.